ISOGD - kuyini? Izici kanye Technologies
Isethi kolwazi lulotshiwe uhlelo ezidingekayo ukuqinisekisa ukuthi iziphathimandla zendawo, amabhizinisi nabantu ngabanye ulwazi olunembile kakhulu yokutshala izimali, imisebenzi yokuthuthukiswa komnotho kanye ezisemadolobheni - iyona impendulo yombuzo othi: ISOGD - kuyini. Lolu hlelo Imininingwane okuhlelwe ngokuhambisana ngezizathu Town Planning Ikhodi Russian futhi has lonke ulwazi mayelana izwe, isakhiwo kanye nezinye izindawo. Manje, amaqembu anentshisekelo ungafaka isicelo nganoma yiluphi usizo futhi ufunde indlela ukusebenza ISOGD ukuthi kuyini, futhi ngaso sonke isikhathi ukuthola okufunayo, ngoba izinto agcinwa ngesimo amabalazwe, futhi iqalisa.
Uhlelo ulwazi yadalwa ngo-December 2004 ngesisekelo GGC (State edolobheni-ukuhlela cadastre). Ukuze lolu lwazi ngokwezinga okudingeka senze ngalo GGK zadluliselwa izifunda ezisemadolobheni kanye ejensi kahulumeni emhlabathini kuze kube Julayi 2006. Yilokho uma kwaziwa mayelana ISOGD ukuthi kuyini, nokuthi ingabe funktsonalnee emisha uma ziqhathaniswa simiso esidala GGK.
Ukuze isingeniso nokusetshenziswa kolwazi GGK mithetho elandelayo yasetshenziswa: Isahluko 11 Town Planning Ikhodi 1998, kwethulwa izwi lesinqumo kahulumeni 29 Julayi 1998, imidanti ethile SP 1996, SNIP (i-Odinensi Ministry of Ukwakhiwa WaseRussia kusuka 1996 Ukufundiswa ku-oda zokuvunywa, ukuthuthukiswa, ukwamukelwa neluhlolo bekuhlela imibhalo ezisemadolobheni (oda we State Construction iKomiti 2002).
Namuhla namanje, kukhona ukutolika eziningana ISOGD ukuqonda ukuthi iyini. Ngaphezu kwakho konke, lesi simiso kuphela izifunda zomasipala kanye nezifunda zasemadolobheni zalwa neqoqo ubuncane zici lemali ebekwe Urban Planning Ikhodi uyakucabangela uhlelo ulwazi. Okusho okuqukethwe efanayo - ngaphandle ingxenye engokomthetho - leli gama siqondwa njengoba uhlelo ulwazi noma ubani emisebenzini intuthuko yasemadolobheni, ukuhlinzeka lonke ulwazi ukuqaliswa yayo.
ISOGD esifundeni eMoscow, isibonelo, kuyinto database olulodwa esakhiweni nokuthuthukiswa yonke insimu yalo, ezweni elise phakathi kwemingcele yabo kwezakhiwo ubunjiniyela kanye nezokuxhumana, cishe njalo ngemva wokwakha dolobha, kanye neminye imininingwane edingekayo. Kukhona zonke izinkonzo zomphakathi ngesimo ulwazi mayelana lwekutfutfukisa etholakalayo. Injongo yokubhalisa kanye nokwaziswa yokuhlala e ISOGD eMoscow Region - systematization kanye nokubuyekeza ulwazi nokuthuthukiswa amasimu, yentuthuko yabo.
Ngo-2006, Lesinqumo LoMkhandlu Uhulumeni waseRussia, owawuthi uhlelo ulwazi lwekutfutfukisa yokutholwa ngendlela kusebenziseka kalula. Amaforamu ISOGD kufanele kube ngale ndlela.
1. Imibhalo ephathelene zenhlangano kamasipala - nekuhlela indzawo.
2. Imibhalo Ukuhlela RF izindawo zesihloko kumasipala.
3. Imibhalo kanye izinto ukuze ngisekele kubo mayelana nekuhlela indzawo kumasipala.
4. Imithetho yokwakha nokusetshenziswa komhlaba ukuthi iguqule kubo.
5. Imibhalo indawo yokuhlela.
6. Imibhalo njengoba nemibandela yemvelo kanye eyenziwe.
7. Imibhalo zokususwa ukubhuka komhlaba ngezinhloso kamasipala noma umphakathi.
8. Imibhalo kanye kuncike ethuthukiswayo eyakhelwe-up.
9. izinto cartographic futhi geodetic.
Ngaphezu kwalokho, ezengeziwe fixed ngesinqumo neziphathimandla zendawo, ngodonga amasha enziwe futhi anakekelwa ukuthi noma iyiphi inkomba ISOGD yayitholakala kulabo abayidingayo.
Imisebenzi kanye nezinqubo
Ukuvunywa kwemibhalo ku kokuqhuba ISOGD ngo-2007, kwakubikwa oda Ministry of Development Regional, owawuthi amabhuku kuvunyelwa imibhalo ukwenza le nqubo elandelayo.
1. imibhalo Accounting, ozokusebenza ngezi ufakwe ISOGD, imibhalo phrojekthi zihlanganisiwe kulokhu.
2. Ukubhaliswa amadokhumenti zizofakwa ku isisekelo idatha.
3. Ufaka Imibhalo e isisekelo idatha.
4. Ukuhlinzekwa kolwazi ISOGD yimuphi umuntu onentshisekelo.
Ukuze uthole ulwazi mayelana zonke imibhalo yokuhlela ezibekwe izincwadi ekhethekile, ezithinta ngezigaba bebodwa, ezigabeni ezithile kanye nezici. Imibhalo ISOGD amabhuku accounting, ukubhalisa izicelo nokuhlinzekwa kolwazi ku ibhuku elilodwa ingxenye ngayinye, yakhiwa ebhukwini. Cases ngokuphathelene umhlaba nokuhlela amaphrojekthi babe incwadi ehlukile esimweni ngasinye. Amanndla has izinhlobo phezu amahlanu kwemibhalo.
Ukubhalisa kwemibhalo wenziwa ukuhlinzekwa la masevisi zomphakathi ukuhlela zasemadolobheni.
Kwathengwa isakhiwo esiyisitezi imvume - kokukhipha idokhumenti.
Isaziso ukuqala ukwakhiwa - ukugcwalisa.
Imvume ukungena luhlobo - Ukukhishwa idokhumenti.
Itulo uhlelo - kokukhipha idokhumenti.
Amaphepha wekuhlela insimu - kusebentisana nokuvunywa idokhumenti.
Ukubhalisa arekhoda Nokho opharetha eqala kokuhlolisisa esiyisibopho ukuphelela kwalo, akusho ukwandisa imigomo ukuhlinzekwa kwemisebenzi yomphakathi ngoba ukukhipha izimvume futhi zikhishwa nokubeka isikhungo. Ezimweni lapho ulwazi kusuka ISOGD ekulungiseleleni imibhalo project ekhona gcwele andla kabusha imibhalo wesicelo ayidingelwa imvume yokwakha, akudingekile, futhi enikeza isaziso ekuqaleni komsebenzi esakhiweni.
ISOGD olwenziwa nendlela ukucutshungulwa inhlukano kwemibhalo iphepha nekhompyutha okufana AISOGD uhlelo ezenzakalelayo. Ivolumu inquma degree ezishintshayo kanye nokwethulwa ukusetshenziswa eqondile isofthiwe.
Kungaba kusuka noma ukusebenza okungenani njengoba ezishintshayo ezimali iphepha idatha ingobo yomlando noma njengoba izinqubo zokulondoloza kwemibhalo electronic, amakhadi idatha ku database uphinde ukubonise usebenzisa GIS (zolwazi lwendawo izinhlelo) noma ukusebenza amaningi njengoba inqubo ezenzakalelayo wonke umkhiqizo kanye nezokuphatha imisebenzi lwekutfutfukisa.
Ngokwesibonelo, ezifana ISOGD eMoscow, lapho ngisho interagency ezenzakalelayo Imininingwane nokuxhumana, plus uwalungise wonke amasevisi elihunyushwe emkhakheni ukuhlela zasemadolobheni - ngekhompyutha ngokugcwele.
Automated ISOGD siqukethe amamojuli ezahlukene isofthiwe nokusebenza kwabaningi babo ukuthi kungaba isofthiwe ejwayelekile. Ukuze uthole usizo nolwazi kakade ibhalwe ukhona SEAD (idokhumenti ingobo yomlando electronic) kanye Edms (umculu ukuphathwa electronic).
Sekela izinqubo lenhlangano BPMS noma INDLEBE (ukuphathwa iziqondiso electronic nezokuphatha) kanye ne-software ukuphathwa komsebenzi okhishiwe. Ukuze yolwazi kufanele DBMS (ngabaphathi semininingwane) kanye MDM - Master Ukuphatha idatha (master idatha), NSI (normative inkomba Imininingwane) noma CCM (ulwazi lokufaka ikhodi uhlelo kanye ngezigaba).
Ngaphandle isofthiwe ngenhla khona ohlelweni, isibonelo, ISOGD isitoreji idatha electronic. umsebenzi GIS (ezindawo Imininingwane uhlelo) kanye CAD (nge okuyinto design abasizwa-computer) ngedatha ngekwendzawo.
kohlaziyo idatha kudinga kwezamabhizinisi amathuluzi (Business intelligence). interface yomsebenzisi inikeza ibhizinisi portal, geoportal, iwebhu portal kwi-inthanethi. Yohlelo nihlanganyele ngokuzenzakalelayo, esihlinzeka izakhiwo isevisi ngamakhasimende (SOA) kanye SMEV - interagency ukuxhumana ngogesi.
Manje i-Town Planning Ikhodi Russian izinhlelo zokulawulwa kolwazi kuyadingeka ukuqinisekisa imisebenzi ukuhlela zasemadolobheni emazingeni ezimbili ukuphathwa. Lokhu ezingeni federal - TP FGIS (Federal State Imininingwane simiso nekuhlela indzawo.) Futhi ezingeni izifunda zomasipala nasemadolobheni, nayo kufanele agcine ngokuhambisana kweDolobha okdeksu nemithetho kahulumeni ISOGD siqu.
Ukwazisa umsebenzi ukuhlela zasemadolobheni wenziwa kwalokhu okungenhla ezimbili futhi kumazinga alandelayo: zesifunda, ezingeni kwemiphakathi zasemaphandleni nezasemadolobheni futhi ezingeni ngabanye nezinhlangano ezingokomthetho. At ngamunye Ezingeni has imithetho yayo siqu neziqondiso, kuzo zonke izinkethi zichaziwe ngezansi.
Amazinga we yombuso kanye zesifunda
Town Planning Ikhodi, izinguquko abanengi benziwa ngo-2011, kuhlanganise isihloko esisha 57,1, okuyinto inquma FGIS TP, ie isimo yase indawo uhlelo ulwazi ukuhlela. Ministry of Economic Development ngo-2014 futhi eziqhutshwa ohlelweni. Ngaphambili, lo msebenzi sagcwaliseka ngo ukuthuthukiswa kwesifunda.
izifunda ISOGD akuzona ikuyo yonke indawo namuhla, Nokho, okuyinto, alisho futhi isihloko Russian Federation ezinqumweni ezimele mayelana nemithetho yokuvuma elawula kokubili ukudalwa kanye nokugcinwa ISOGD esifundeni siqu. Ministry of Economic Development ucele cabanga bese udala isofthiwe ezivamile futhi hardware izixazululo ezindaweni kolwazi.
Iziphathimandla Executive yeCentral Federal District of luhlelo lwekusebenta zaleli Su sotsekonomrazvitiya CAO phambi 2020 kudingeka umbiko wekota eMnyango ekusetshenzisweni kolwazi izinhlelo ukuqinisekisa imisebenzi emkhakheni ukuhlela zasemadolobheni.
Izifunda ukuthi kukhona sekuqalile ISOGD zesifunda: esifundeni Volgograd, Kaluga esifundeni, Kaliningrad esifundeni, esifundeni eMoscow, Orenburg esifundeni, Yaroslavl esifundeni, yaseTyumen, nabanye. Ilungiselela bill ku ethula izichibiyelo entsha Russian kweDolobha Ikhodi ohlinzekela izinto eziphathelene kuya ISOGD ukusungulwa.
Izinga kwezifunda zasemadolobheni kanye kamasipala
Zonke izifunda zomasipala kanye nezifunda zasemadolobheni nokuziphatha ISOGD ubophekile ngaphansi uMthetho Federal of WaseRussia kanye kweDolobha Ikhodi. Lokhu kwenziwa ohulumeni basekhaya nge ezimele iqoqo idatha, ukucubungula, ukuqopha, ukubuyekeza, ukuphatha, ezimali okwalandela bese ukugcina ulwazi wathola, okuyizinto ezidingekayo ukuze imisebenzi lwekutfutfukisa.
ezigudle emadolobheni ukulungiselela kanye udaba GPZU (uhlelo lokuthuthukisa wesabelo ezweni) futhi ezihlukahlukene neminye imisebenzi usebenze endaweni ezisemadolobheni. Nokho, akekho Mthetho noma Ikhodi ngqo isidingo sokulondoloza ISOGD ayibonisi. Ngo-January 2015, umthetho okushintshile, futhi amandla ISOGD bayiswa ezindaweni zikamasipala kwemizi esemaphandleni. A Inani lamacala sikhombisa postback ngesisekelo izinkontileka ngqo, ngakho-ke, manje idinga ulwazi ukwesekwa emiphakathini yasemakhaya okuhambisanayo ukuqhuba ISOGD yabo. Regulation kusebenza noma ikuphi cishe okufanayo, maqondana kokunikezela labantu ngolwazi, izitatimende imibhalo ephathelene nomsebenzi edolobheni-ukuhlela.
Izinga abantu zomthetho futhi zemvelo
Scientific, commercial, design, ezenhlalo, inhlolo-vo, ukwakhiwa, nezinye izinhlangano kanye nabantu, futhi, bangamalungu Urban Development. Urban Planning Code okubekwe ngayo sayo samanje akusho alawule, kodwa kungagcini ukudalwa kanye nokugcinwa izinhlangano ezingokomthetho kanye nabantu ISOGD njengoba kubasiza ukuba ahole emisebenzini ezidingekayo futhi ewusizo emkhakheni ukuhlela zasemadolobheni.
Izinhlelo zezokwazisa okusiza ukugcina uhlelo imisebenzi abantu yemvelo kanye zomthetho kungaba ezahlukene. Ezisetshenziswa kakhulu - izinhlelo yesimanje Esakhiweni Imininingwane Modeling noma Isakhiwo Imininingwane Model (Isakhiwo Imininingwane Modeling). Imininingwane ISOGD abangenekayo futhi evulekile, ngaphandle kwalezo enikezwe imithetho kahulumeni njengoba nelungelo. Umzimba egunyazwe ukuba aqhubeke ohlelweni, ihambisana neziqondiso ISOGD futhi njalo inikeza ulwazi uhlelo kunoma iyiphi ngesicelo zikahulumeni, ukuzibusa wendawo kanye amabhizinisi nabantu ngabanye.
Indlela ukulungiselela bese uhambisa isicelo umshushisi. Isitatimende wathi kumshushisi phezu ukungenzi. Ifomu lesicelo ukuze umshushisi. Isitatimende wathi kumshushisi phezu umqashi
Imisebenzi namalungelo yiziphi?
I Holy Trinity Alexander saseNevsky Lavra: umlando, incazelo kanye amahora wokusebenza
Milkshake ngamaqanda: zokupheka
"Colgate ezizwelayo Pro Kusuka Umthwalo Emahlombe" - wokuxubha zokwelapha
Pump ngokuba umthombo - engadini kanye ekhaya
Izihloko wenza utamatisi ngezandla zakho: imibono abathandwayo
Kanjani ukuze uthole abakhulelwe ngokubasiza bakhululeke lapho amaphesenti angu-100? Ezinsukwini ezithile ungathola abakhulelwe
Funda ukwenza i ukhilimu amafutha
Nini Ngingaya ukudlala ezemidlalo, esezele nendlela ukuqala